Hapana Munhu Anogona Kushandira Vanatenzi Vaviri | Yokudzidza
Nharireyomurindi—Yekudzidza | April 2014
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mizo Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Hapana Munhu Anogona Kushandira Vanatenzi Vaviri
“Hapana munhu anogona kushandira vanatenzi vaviri . . . Hamungagoni kushandira Mwari pamwe chete nePfuma.”—MAT. 6:24.
Bhaibheri rinotibatsira sei kuti tive nemaonero akanaka pakuchengeta mhuri yedu?
Zvatinosarudza zvinoratidza sei kuti Jehovha ndiye chete Tenzi wedu?
Jehovha anokomborera sei zvisarudzo zvedu kana tikaratidza kuti tinovimba naye?
1-3. (a) Mazuva ano vakawanda vanosangana nematambudziko api panyaya yemari, uye vamwe vanoedza kuagadzirisa sei? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.) (b) Vabereki vanonetseka nei panyaya yokurera vana?
“MURUME wangu James aidzoka kumba achibva kubasa akaneta chaizvo mazuva ose, asi mari yaaiwana yaingokwanirana nezvataida chete,” anodaro Marilyn. * “Ndaida kumurerutsira uye ndaida kutengerawo mwanakomana wedu, Jimmy zvimwe zvinhu zvakanaka zvaivawo nevekuchikoro kwake.” Marilyn aidawo kubatsira dzimwe hama dzavo uye kuchengeta mari yokuzoshandisa mune ramangwana. Shamwari dzake dzakawanda dzainge dzatamira kune dzimwe nyika kuti dziwane mari yakawanda. Asi paairamba achifunga nezvazvo, aishaya kuti osarudza zvipi. Nemhaka yei?
2 Marilyn aitya kusiya mhuri yake uye aida kuramba achiita zvinhu zvokunamata nemhuri yake. Asi paaifunga nezvevamwe vakaenda kunze kwenyika, aiona sokuti mhuri dzavo dzaiita zvakanaka pakunamata. Ainetsekawo kuti aizorera sei Jimmy iye ava kure zvakadaro. Aizokwanisa here kurera mwanakomana wake “mukuranga nokutungamirira pfungwa kunoitwa naJehovha” achishandisa Indaneti?—VaEf. 6:4.
3 Marilyn akatsvakawo mazano kune vamwe. Murume wake aisada kuti aende, asi akati aisazomurambidza. Vakuru nevamwe vomuungano vakamupa zano rokuti asaenda, asi hanzvadzi dzakawanda dzakamukurudzira kuti aende. Hanzvadzi dzacho dzaimuudza kuti, “Kana uchida mhuri yako enda.” “Kuenda kunze kwenyika hakungambokutadzisi kushumira Jehovha.” Marilyn akarovera mwoyo padombo, ndokuonekana naJames naJimmy, akaenda kubasa mhiri kwemakungwa. Akavavimbisa kuti, “Handisi kuzogarisa.”
KURIRITIRA MHURI UYE ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI
4. Nei vakawanda vachitamira kune dzimwe nyika, asi ndiani anowanzopedzisira ava kuchengeta vana vavo?
4 Jehovha haadi kuti vashumiri vake vatambure, uye kubvira kare vanhu vaitamira kune imwe nzvimbo kana urombo hwanyanya. (Pis. 37:25; Zvir. 30:8) Jakobho akatuma vanakomana vake kuIjipiti kuti vanotenga zvokudya kuti vasafa nenzara. * (Gen. 42:1, 2) Mazuva ano vakawanda vanoenda kunoshanda kune imwe nyika kwete nokuti vanenge vava kufa nenzara. Asi vanogona kunge vaine chikwereti chakakura. Vamwe vanongoda kuti mhuri yavo ive neupenyu huri nani. Kuti vazadzise zvinangwa zvavo, vakawanda vanopedzisira vasingachagari nemhuri dzavo, zvimwe vachitamira kune imwe nzvimbo munyika mavo kana kuti kuenda kunze kwenyika. Kakawanda vanosiya vana vadiki vachichengetwa nemubereki mumwe chete, kana kuti vachichengetwa nemumwe mwana anenge akura, vanambuya, vamwe voukama kana shamwari. Kunyange zvazvo vaya vanoenda kunze kwenyika vachirwadziwa nokusiya vavakaroorana navo kana kuti vana, vakawanda vavo vanofunga kuti hapana zvokuita kunze kwokuenda.
5, 6. (a) Jesu akadzidzisa kuti munhu anofanira kuitei kana achida kufara uye kuva neupenyu hwakanaka? (b) Jesu akadzidzisa vanhu kuti vanyengeterere chii? (c) Jehovha anotikomborera sei?
5 Munguva yaJesu, vanhu vakawanda vaivawo varombo, uye vangangodaro vaifunga kuti vaigona kufara uye kuva neupenyu huri nani kana vaizova nemari yakawanda. (Mako 14:7) Asi Jesu aida kuti vavimbe naJehovha, uyo anotipa pfuma inogara nokusingaperi. MuMharidzo yepaGomo, Jesu akati mufaro chaiwo uye upenyu hwakanaka haubvi pakuti tine pfuma yakawanda sei, kana kuti pakushanda kwatinoita, asi pakuva neukama hwepedyo naBaba vedu vokudenga.
6 Mumunyengetero wokuenzanisira, Jesu haana kutidzidzisa kunyengeterera pfuma, asi kuti tikumbire “zvokudya zvedu zvanhasi,” kureva zvatinoda zuva nezuva. Akanyatsoudza vaimuteerera kuti: “Regai kuzviunganidzira pfuma panyika . . . Asi, zviunganidzirei pfuma kudenga.” (Mat. 6:9, 11, 19, 20) Tine chokwadi chokuti Jehovha achatikomborera sokutivimbisa kwaanoita. Mwari haangofari chete nezvatinenge taita asi anototibatsira kuwana zvokurarama nazvo. Chokwadi kuti tinyatsofara muupenyu uye kuti tive neupenyu hwakanaka, tinofanira kuvimba naBaba vedu vokudenga pane kuvimba nemari.—Verenga Mateu 6:24, 25, 31-34.
7. (a) Jehovha akapa ani basa rokurera vana? (b) Nei vabereki vachifanira kunge varipo vose vachirera vana vavo?
7 ‘Kutanga kutsvaka kururama kwaMwari’ kunosanganisira kuona nyaya yokuchengeta mhuri semaonerwo ainoitwa naJehovha. MuMutemo waMosesi maiva nepfungwa inoshandawo kuvaKristu, yokuti vabereki vanofanira kudzidzisa vana vavo nezvaMwari. (Verenga Dheuteronomio 6:6, 7.) Mwari akapa basa iroro kuvabereki, kwete kuna mbuya nasekuru kana mumwe munhu upi zvake. Mambo Soromoni akati: “Mwanakomana wangu, teerera kuranga kwababa vako, uye usasiya mutemo waamai vako.” (Zvir. 1:8) Jehovha aida kuti vabereki vose vange varipo vachibatsirana pakutungamirira uye pakudzidzisa vana vavo. (Zvir. 31:10, 27, 28) Vana vanodzidza zvakawanda kuvabereki vavo kunyanya zvine chokuita nekunamata, kana vachinzwa vabereki vavo vachitaura nezvaJehovha zuva nezuva uye vachiona zvavanoita.
ZVINOZOITIKA HANDIZVO ZVAUNENGE UCHITARISIRA
8, 9. (a) Zvii zvinowanzoitika kana mubereki achigara kure nemhuri yake? (b) Kugara kure nemhuri kunogona kukonzera matambudziko api?
8 Vasati vaenda kunze kwenyika, vakawanda vanoedza kufunga ngozi dziripo, asi vashoma ndivo vanoona matambudziko ose anozovapo kana vasiya mhuri dzavo. (Zvir. 22:3) * Pasina nguva Marilyn aenda kunze kwenyika, akatanga kusurukirwa sezvo ainge ava kure nemhuri yake. Ndizvo zvaiitawo murume wake nemwanakomana wake. Jimmy aigara achiti, “Makandisiyirei?” Mwedzi yaainge akaronga kuzopedzera ari mhiri kwemakungwa payakapfuura ikapedzisira ava makore, akatanga kuona kuti zvinhu zvainge zvisisina kumira zvakanaka mumhuri yake. Jimmy akanga asisadi kutaura naamai vake uye asisavafariri. Marilyn anoti, “Mwana wangu akanga asisandidi.”
9 Kana vabereki nevana vasingagari pamwe chete semhuri, vanogona kupedzisira vasisafari uye vasisina unhu hwakanaka. * Kana vana vakagara kure nevabereki vavo vachiri vaduku chaizvo uye kwenguva refu, vanotonyanya kukanganisika. Marilyn akaudza mwanakomana wake Jimmy kuti kuenda kwaakaita kunze kwenyika aiitira iye. Asi Jimmy aiona sokuti amai vake vainge vamutiza. Pakutanga aisafara nokuti amai vake vainge vasipo. Asi nokufamba kwenguva, aisafara kana amai vake vadzoka. Sezvinowanzoitwa nevana vanosiyiwa nevabereki, Jimmy ainzwa sokuti ainge asisafaniri kuteerera amai vake uye kuvada nokuti vainge vamusiya.—Verenga Zvirevo 29:15.
Haukwanisi kumbundira mwana wako paIndaneti (Ona ndima 10)
10. (a) Kutumira vana zvinhu panzvimbo pokugara navo uchivachengeta kunovakanganisa sei? (b) Kana mubereki achiedza kurera mwana wake ari kure zvii zvaasingakwanisi kuita?
10 Kunyange zvazvo Marilyn aitumira mari nezvinhu, akaona kuti akanga achizviparadzanisa nemwanakomana wake uye aiita kuti mwana wake akoshese pfuma kupfuura mhuri uye zvinhu zvokunamata. (Zvir. 22:6) “Musadzoka,” Jimmy aiudza amai vake kudaro. “Rambai muchingotumira zvinhu.” Marilyn akatanga kuona kuti aisakwanisa kurera mwanakomana wake achiita zvokumunyorera tsamba, kumufonera, kana kuti kutaura naye achimuona pavhidhiyo. Anoti, “Haukwanisi kumbundira mwana wako kana kumutsvoda paIndaneti.”
Paunenge uchigara kure newawakaroorana naye, muedzo upi waungasangana nawo? (Ona ndima 11)
11. (a) Kushanda uchigara kure newawakaroorana naye, kunokanganisa sei imba? (b) Imwe hanzvadzi yakazoona sei kuti yaifanira kudzokera kunogara nemhuri yayo?
11 Ukama hwaMarilyn naJehovha uye nemurume wake James hwainge husisinawo kusimba. Ainge ava kupinda misangano uye kuita ushumiri zuva rimwe chete pavhiki kana kuti aitotadza, uye aitofanira kuramba zvakasimba kudanana nemurume waaishandira. Sezvo Marilyn naJames vaigara kure nakure vasingakwanisi kuudzana zvaivanetsa, vose vakatombofarirana nevamwe vanhu vakapotsa vaita upombwe. Marilyn akazoona kuti kunyange zvazvo iye nemurume wake vasina kuita upombwe pavaigara kure nakure vaisakwanisa kuudzana zviri kutsi kwemwoyo uye kurara vose sezvinotaurwa neBhaibheri. Vakanga vasingakwanisi kurezvana, kuyemerana, kumbundirana ‘vachiratidzirana rudo’ uye kupanana bonde. (Rwiyo 1:2; 1 VaK. 7:3, 5) Uye vaisakwanisa kunamata Jehovha pamwe chete nemwanakomana wavo. “Pandakadzidza pagungano kuti mhuri inofanira kugara ichiita kunamata kwemhuri kuti izopona pazuva guru raJehovha, ndakaona kuti ndaifanira kudzokera kumba,” anodaro Marilyn. “Ndaifanira kutangazve kusimbisa ukama hwangu naMwari uye kuvakazve mhuri yangu.”
ZANO RAKANAKA NERAKAIPA
12. Izano ripi romuMagwaro rinogona kupiwa kune vaya vanogara kure nemhuri dzavo?
12 Marilyn paakati ava kudzokera kumusha, vanhu vakataura zvakasiyana-siyana. Vakuru vemuungano yake yemhiri kwemakungwa vakamurumbidza chaizvo nokuti ainge aratidza kutenda uye ushingi. Asi vamwe vaigarawo kure nemhuri dzavo vakamushora. Pane kumutevedzera, vaitomukurudzira kuti arambe ari ikoko. Vaiti, “Pasina nguva unenge wadzoka iwe.” “Uchararama sei kana wadzokera kumusha?” Pane kutaura mashoko asingakurudziri akadaro, vaKristu vanofanira kurayira ‘vakadzi vaduku kuti vade varume vavo, kuti vade vana vavo, vaite mabasa epamba,’ kureva pamba pavo, “kuti shoko raMwari rirege kutukwa.”—Verenga Tito 2:3-5.
13, 14. Nei munhu achifanira kuva nokutenda kuti aite zvinodiwa naJehovha pane kuita zvaanenge achinzi nevomumhuri yake aite? Taura muenzaniso.
13 Vanhu vakawanda vanoenda kunoshanda kune dzimwe nyika vanenge vakakurira munzvimbo dzinonyanya kukoshesa tsika dzavo uye zvavanotarisirwa kuti vaite nehama dzavo, kunyanya vabereki. MuKristu anorega kutevedzera tsika idzodzo kana kuti zvinodiwa nemhuri achiitira kufadza Jehovha, anenge aratidza kutenda.
14 Funga nezvaCarin uyo anoti: “Pandakabereka mwanakomana wangu Don, ini nemurume wangu taishanda mhiri kwemakungwa, uye ndainge ndichangotanga kudzidza Bhaibheri. Vanhu vose vomumhuri mangu vaitarisira kuti ndaizoendesa Don kumusha kuti anorerwa nevabereki vangu kusvikira tava nemari.” Carin paakasimbirira kuti aida kuchengeta mwana wake ega, hama dzake kusanganisira murume wake vakati aiva neusimbe uye vaimuseka. Carin anoti: “Kutaura chokwadi, panguva iyoyo ndaiona pasina chakaipa kuti Don ambonogara nevabereki vangu kwemakore mashoma. Asi ndaiziva kuti Jehovha akapa ini nemurume wangu basa rokurera mwanakomana wedu.” Carin paakazova nepamwe pamuviri, murume wake asingatendi akamuti aifanira kupabvisa. Kusarudza zvakanaka kwakaita Carin pakutanga kwakasimbisa kutenda kwake, uye kwakaita kuti aite zvinodiwa naJehovha. Iye zvino Carin nemurume wake nevana vavo vari kugara pamwe chete vachifara. Kudai Carin akaendesa mwana wake mumwe chete kana kuti vose kunochengetwa nevamwe, zvimwe mhuri yake ingadai isiri kufara sezvairi kuita.
15, 16. (a) Tsanangura zvakaitika kune imwe hanzvadzi yakasiyiwa ichiri mudiki. (b) Nei isina kuda kusiyawo mwanasikana wayo?
15 Chimwe Chapupu chinonzi, Vicky chinoti: “Ndakamborerwa naambuya kwemakore mashoma, vabereki vangu vachigara nemunun’una wangu. Pandakazotanga kugara nevabereki vangu, kuvada kwandaiita kwange kwadzikira. Munun’una wangu ainzwa akasununguka kutaura navo, kuvambundira uye kuva neushamwari navo. Kubvira ndichiri muduku ndainge ndisina kusununguka kuvabereki vangu uye ndaiomerwa nokuvaudza zvaiva pamwoyo pangu. Ini nemunun’una wangu takavimbisa vabereki vedu kuti tichavachengeta kana vakwegura. Ini ndichavachengeta nokuti ndinoziva kuti ndinofanira kudaro, asi munun’una wangu achavachengeta nokuti anovada.
16 “Amai vangu vakati vaida kundirerera mwanasikana wangu, sekurerwawo kwandakaitwa naamai vavo. Ndakavarambira asi ndisingavagumburi,” anodaro Vicky. “Ini nemurume wangu tinoda kuzvirerera mwana wedu nenzira inodiwa naJehovha. Uye handidi kuzokanganisa ukama hwangu nemwanasikana wangu.” Vicky akaona kuti kuita zvinodiwa naJehovha kunokosha kupfuura zvaunonzi uite nemhuri yako uye kuva nemari yakawanda. Jesu akataura zvakajeka kuti: “Hapana munhu anogona kushandira vanatenzi vaviri,” Mwari pamwe chete nePfuma.—Mat. 6:24; Eks. 23:2.
JEHOVHA ANOITA KUTI ‘TIBUDIRIRE’
17, 18. (a) Nguva dzose vaKristu vechokwadi vanogona kuvimba nevimbiso dzipi? (b) Munyaya inotevera tichakurukura mibvunzo ipi?
17 Baba vedu Jehovha vakazvipira kutibatsira kuti tiwane zvinhu zvinonyanya kukosha muupenyu kana tikatanga kutsvaka Umambo nokururama kwavo. (Mat. 6:33) Kunyange tikasangana nedambudziko rakaita sei, Jehovha anovimbisawo kuti achatipa “nzira yokubuda nayo” isingaiti kuti tityore mitemo yake. (Verenga 1 VaKorinde 10:13.) Jehovha achatibatsira kana ‘tikamumirira,’ uye kana ‘tikavimba naye.’ Tinoratidza kuti tinovimba naye kana tikanyengetera kuti atipe uchenjeri nokutitungamirira uye kana tikaita zvaanotaura muShoko rake Bhaibheri. (Pis. 37:5, 7) Achakomborera zvatinoita pakumushumira saTenzi wedu mumwe chete wechokwadi. Kana tikamuisa pokutanga muupenyu, achaita kuti ‘tibudirire.’—Enzanisa naGenesisi 39:3.
18 Chii chatingaita kuti tigadzirise ukama hunenge hwakanganiswa nemhaka yokugara takaparadzana? Tingaitei kuti tiriritire mhuri yedu asi tichigara nayo? Uye tingabatsira sei vamwe kuti vaitewo zvisarudzo zvakanaka panyaya iyi? Mibvunzo iyi ichapindurwa munyaya inotevera.
^ ndima 1 Mazita akachinjwa.
^ ndima 4 Pose pavakaenda kuIjipiti, vanakomana vaJakobho vanofanira kunge vaisapfuudza mavhiki matatu vari kure nemhuri dzavo. Jakobho nevanakomana vake pavakazotamira kuIjipiti, vakaenda nemadzimai avo nevana vavo.—Gen. 46:6, 7.
^ ndima 8 Ona nyaya inoti “Kuenda Kunze Kwenyika—Uchitsvaka Upenyu Huri Nani” iri muMukai! yaMarch-April 2013.
^ ndima 9 Mashoko anobva kunyika dzakasiyana-siyana anoratidza kuti kana munhu akanoshanda kunze kwenyika achisiya mhuri yake, zvinowanzoita kuti pave nematambudziko akakura. Vamwe vanopedzisira vava kuita upombwe, ungochani, kana kuti makunakuna, uyewo vana vanoshaya unhu, vanofoira kuchikoro, vanowedzera kuva nehasha, kuzvidya mwoyo, kana kuva nepfungwa yokuda kuzviuraya.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Hapana Munhu Anogona Kushandira Vanatenzi Vaviri
Tevedzera Kutenda kwaMosesi
Unoona “Uyo Asingaoneki” Here?
NYAYA YEUPENYU Kwandasvitswa Nebasa Renguva Yakazara
Iva Akashinga Kwazvo​—Jehovha Ndiye Mubatsiri Wako!
Unonzwisisa Here Kuti Nei Jehovha Achititarisa?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA April 2014
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA April 2014
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA April 2014